Waa Kuwan SHANTA Ciyaartoy Ee Ka Tegi Doona Manchester United 24ka Saacadood Ee Soo Socda - Gool24.Net
Waa Kuwan SHANTA Ciyaartoy Ee Ka Tegi Doona Manchester United 24ka Saacadood Ee Soo Socda
October 15, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Manchester United ayaa haysata 24 saacadood oo ay kooxdeeda kaga dirto shan ciyaartoy oo la filayo inay siyaabo kala duwan ku baxaan.
Suuqa dadban ee maxalliga ah ee u furnaa kooxaha Premier League ayaa soo xidhmaya Jimcaha berri, kaas oo u ogolaanayay inay kooxaha heerarka hoose ee Ingiriiska gudihiisa ay ciyaartooyo kala soo saxeexan karaan ama ay iyaguba ciyaartooyo siin karaan.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa xiddigaha da’da yar ee kooxdu u muujinayay niyad-samaan laakiin waxa muddooyinkii dambe soo baxayay in ay yar tahay fursadaha ay heli karayaan maadaama ay kooxdu samaysay saxeexyo cusub, horyaalka Premier League na uu tartankiisu adag yahay.
Difaaca da’da yar ee Teden Mengi ayaa la sheegay inuu doonayo inuu si ku meelgaadh ah uga tago kooxda, inkasta oo uu sumcad badan ku kasbaday waqtigii yaraa ee fursadda loo siiyey.
Mengi ayaa kasoo muuqday kulankii Europa League ee xili ciyaareedkii hore ay ku karbaasheen LASK, waxaana 18 jirkan la sheegayaa inuu doonayo inuu amaah ku baxo oo uu soo helo khibrad iyadoo waqtiga uu haystaana tahay 24 saacadood oo kaliya.
Ethan Laird oo ka tirsan kooxda da’yarta ee Manchester United, dhawr jeerna helay fursado uu kooxda waaweyn ugu ciyaaray sida kulankii Astana ee Europa League ee xili ciyaareedkii hore ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda saacadaha soo socda ka tegi doona Old Trafford.
Waxa kale oo liiskan ku jira Tim Fosu-Mensah oo sannadkii 2016 kulankiisii ugu horreeyey u ciyaaray Manchester United, laakiin dhaawacyo badan, qalliin lagu sameeyey sannadkii hore iyo tartanka gudaha kooxduba ay xaddidayaan jaaniska uu heli karayo.
Kulankii Crystal Palace ayuu hab-difaacis niyad-jab ahaa muujiyey, waxaanay ciyaartaasi noqotay middii ugu dambaysay ee lagu arkay fagaareyaasha.
Di’Shon Bernard iyo Dylan Levitt ayaa iyaguna ku jira liiskan, waxaana labadoodaba u gacan haadinaya naadiyo yaryar oo gudaha UK ah, kuwaas oo haddii ay tagaan ay suurtogal tahay inay ka helaan fursado.
Dhinaca kale, goolhaye Lee Grant oo la illoobay ayaa ka sugaya kooxda inay mustaqbalkiisa meel ku tiiriyo, iyadoo 37 jirkan ay rajadiisu sii xumaatay markii uu Old Trafford yimid Dean Henderson.
Waxa kale oo kooxda ka sugaya jawaab Sergio Romero oo dalbanaya in la kansalo heshiiskiisa si uu ugu biiri karo kooxda uu doonayo ka hor inta aanu suuqu si rasmi ah u xidhmin.